साग बेच्‍नेलाई कर, हेलिकोप्टर व्यवसायीलाई छुट ! « Drishti News – Nepalese News Portal
साग बेच्‍नेलाई कर, हेलिकोप्टर व्यवसायीलाई छुट !
१९ मंसिर २०७८, आइतबार 6:35 am
३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइमा रहेको तीर्थस्थल पाथीभरामा हेलिकोप्टर । तस्बिर : आनन्द गौतम/कान्तिपुर
काठमाडौं । प्रत्येक साताको शनिबार फुङलिङ नगरपालिका–७ दोखुकी पुष्पा लिम्बू साग बेच्न तोक्मे डाँडामा लाग्ने हाट पुग्छिन् । अढाइ घण्टाको उकालो पसिना काढ्दै सागको भारी लिएर पुग्दा नपुग्दै उनलाई नगरपालिकाले १० रुपैयाँको कर रसिद थमाउँछ । शनिबार र मंगलबार लाग्ने हाटमा टहरा राख्नेले ५० रुपैयाँसम्म कर बुझाउनुपर्छ ।
नगरपालिकाले यसलाई भने करको दायरामा ल्याइएको छैन । व्यावसायिक रूपमा उडिरहेका अधिकांश हेलिकोप्टरले पाथीभरामा उडान भरिरहेका छन् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले पनि कुनै शुल्क तोकेको देखिँदैन । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको हेलिप्याड र सुकेटारबाट पाथीभरा मन्दिर तीर्थयात्री पुर्‍याउँदा प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ लिन्छन् ।
सामान्यतस् एक पटकमा ५ जना यात्रु उडाइन्छ । धरानबाट प्रतिव्यक्ति ३२ हजार रुपैयाँमा यात्रु उडाउने गरेको धरान होलिडे ट्राभल एन्ड टुरका मार्केटिङ म्यानेजर पविन श्रेष्ठ बताउँछन् । एउटै उडानमा १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ । पाँचथरको फिदिमबाट २२ हजार र इलामको कन्यामवाट जनही ३५ हजार रुपैयाँ भाडा लिइन्छ ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।